Sidee Loo Dardar Galiyaa Dheef-shiid kiimikaadkaaga Miisaankaaguna waa dhakhso | Cuntada Nutri
Sida loo dedejiyo dheef-shiid kiimikaadka
Michael Serrano | | Tabaha miisaankaaga luma, Cuntada
Ogaanshaha sida loo dedejiyo dheef-shiid kiimikaadkaaga ayaa noqon kara mid waxtar badan leh, gaar ahaan haddii aad leedahay dheef-shiid kiimikaad gaabis ah. Markay soomi weydo dheef-shiid kiimikaadka ayaa noqon kara caqabad kaa horjoogsata inaad lumiso miisaanka aad u baahan tahay inkasta oo aad dadaal badan tahay.
Dheef-shiid kiimikaadka waa habka iyo qiimeynta jirkaagu u isticmaalo inuu cuntada ugu beddelo tamar isla markaana uu gubo. Sidaa darteed waa qodob go'aaminaya miisaanka iyo dufanka jidhka. Intaas waxaa sii dheer, waxay calaamadeyneysaa xawaaraha aad ku cayillan tahay ama culeyskaagu kaaga dhacay. Soo ogow waxyaabaha ugu waxtarka badan si aad u siiso dheef-shiid kiimikaad kor u kaca oo markaa bilaw inaad gubto kalooriyeyaal badan hadda.
1 Maxay yihiin sababaha keena qunyar socodka?
2 Waxyaabaha caawiya xawaareynta dheef-shiid kiimikaadka
2.1 Layli jimicsi
2.2 Cab biyo kugu filan
2.3 Isticmaal cusbo iodized ah
2.4 Cab bun
2.5 Cun faayib badan
2.6 Isticmaal fiitamiinnada B, birta iyo kaalshiyamka
2.7 Ka fogow cuntooyinka aan loo dulqaadan karin
Maxay yihiin sababaha keena qunyar socodka?
Sidaad horeyba u ogtahay, waxaa jira dheef-shiid kiimikaad degdeg ah iyo dheef-shiid kiimikaad gaabis ah. Taasi waa sababta ay dadka qaarkii u cuni karaan wax walba iyaga oo aan culeys kordhin, halka kuwa kale ay isla markiiba u fiirsadaan cunno saa’id ah oo dhexda ku jirta. Iyo sida ugu dhakhsaha badan ee dheef-shiid kiimikaadka, ayaa sii kordhaya tirada kalooriyada la cuni karo iyada oo aan lagu ogaan cabirka.
Jinsiga, da'da, iyo murqaha ayaa ah qaar ka mid ah waxyaabaha saameeya heerka dheef-shiid kiimikaadka. Laakiin doorka ugu weyn ee heerka uu jirkaagu ku gubto kalooriyada waxaa ciyaari lahaa hiddo-wadaha.
Dadka qaba gaabis dheef-shiid kiimikaad badanaa waxay ka dhaxlaan waalidkood iyada oo loo marayo hiddo-wadaha. Dheef-shiid kiimikaad gaabis ah ayaa sababi kara dhibaatooyin sida cayilnaanta iyo cayilnaanta. Maaddaama ay saameynayaan habka jirku u isticmaalo tamarta, Kuwa soo socdaa waa sababaha kale ee caam u ah dheef-shiid kiimikaadka gaabiska ah:
Cunnooyinka aad u daran, ee dufanka badan, ama ku yar kaarboohaydraytyada
Ka-boodidda cuntada ama beddelashada xilliyada cuntada badanaa
Waxyaabaha caawiya xawaareynta dheef-shiid kiimikaadka
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr caadooyin caafimaad oo kaa caawin kara inaad dedejiso dheef-shiid kiimikaadkaaga. Markaa haddii jidhkaagu ka gaabiyo inuu gubo kalooriyada aad cunayso, iskuday talooyinkan fudud.
Jimicsiga waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah xeeladaha ugu wanaagsan ee lagu dedejinayo dheef-shiid kiimikaadkaaga. Dhaqdhaqaaqa oo kuu dhaqaaqaa wuxuu kaa caawinayaa inaad gubto dufanka, isku soo wada duubkooda oo gaabiya dheef-shiid kiimikaadkaaga. Waxa kale oo ay dhistaa muruq, taas oo muhiim u ah dheef-shiid kiimikaadka, maadaama murqahaagu badan yahay, sida ugu dhakhsaha badan ee ay u shaqayso.
Marka ciyaaro isboorti hadaadan horey u sameyn, adoo hubinaya inaad isku dar jimicsiga jimicsiga iyo tababarka xoogga. Hadaad jimicsi horey u sameysay, raadi siyaabo aad ugu soo bandhigi laheyd firfircoonaan badan howl maalmeedkaaga. Inaad ka degto kursigaaga labadii saacadoodba mar si aad xoogaa u kala bixisid oo aad u sameysid loox ama fadhiisimo qaar waa fikrad aad u fiican.
Sida looga helo wax badan tababarkaaga xoogga
Cab biyo kugu filan
Dheef-shiid kiimikaadkaaga ayaa hoos u dhigi kara haddii aadan cabin biyo kugu filan. Sababta ayaa ah H2O waxay saameyn ku yeelan doontaa isticmaalka tamarta, kobcinta miisaanka oo yaraada. Marka ha ilaawin inaad u dammaanad qaaddo jirkaaga biyaha uu u baahan yahay maalin kasta. Xusuusnow inaad sidoo kale biyo ka siin karto jirka cuntooyin badan oo caafimaad qaba. Tusaale weyn waa qaraha.
Isticmaal cusbo iodized ah
Qanjirka 'thyroid' wuxuu u baahan yahay iodine si uu u maareeyo dheef-shiid kiimikaadka. Soo iibso cusbada iodized-ka ah halkii aad ka dooran lahayd cusbada caadiga ah. Sidoo kale, waa fikrad wanaagsan in la hubiyo in cuntadaada ay ku jirto cuntooyinka hodanka ku ah iodine, sida ku dhacda cowska.
Caffeine waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waxtarka badan marka ay timaado bilaabida mishiinka dheef-shiid kiimikaadka.. Shaah sidoo kale waxay soo saari doontaa saameyn isku mid ah. Dhinaca kale, kafeega laguma talin karo dadka qaba cudurada qaarkood. Markaa kala tasho dhakhtarkaaga marka hore si aad u ogaato in cabitaanka kafeega ay adiga nabad kuu tahay iyo in kale.
Cun faayib badan
Waxaa jira shaqooyin badan oo tilmaamaya in dadka intiisa badani ay cunaan cunno dufan yar. Faa'iidooyinka badan ee maaddadani (oo aad ka heli karto cuntooyin badan) waxay noqon doontaa inaad wax ku biiriso ku ilaali dheef-shiid kiimikaadkaaga inuu ku shaqeeyo awood buuxda.
Isticmaal fiitamiinnada B, birta iyo kaalshiyamka
Fiitamiinnada B, birta iyo kaalshiyamka ayaa ka mid ah nafaqooyinka lala xiriiriyay dardargelinta dheef-shiid kiimikaadka. Badarka oo dhan waa ilaha fitamiin B, halka markay tahay birta, tixgeli isbinaajka iyo digiraha sida digirta ama digirta. Kalsiyum waxaa laga helaa waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo khudradda sida broccoli ama berde.
Ka fogow cuntooyinka aan loo dulqaadan karin
Waxaa jira dad badan oo laaktoos ama gluten u dulqaadan karin. Caabuq ku dhici kara mindhicirada duruufahaas awgeed waxay si xun u saameyn doontaa dhinacyada kala duwan ee caafimaadka, oo ay ku jiraan xawaaraha dheef-shiid kiimikaadka. Markaad weydiiso khubarada sida loo dardar galiyo dheef-shiid kiimikaadkaaga cuntada, waxay sidoo kale inta badan kugula taliyaan xaddididda soodhiyamka iyo walxaha ilaaliya, kuwaas oo badiyaa laga helo dhammaan noocyada cuntooyinka baakadeysan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Sida loo dedejiyo dheef-shiid kiimikaadka
Xisaabi dufanka jirka